Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 40
Ahoana no fomba iainan'ny biby fiompy tsy misy sakafo ary toa tsy misy rivotra mandritra ny fotoana lava fiakaran'ny ala?
Tsy misy zavamaniry biby afaka miaina tsy misy sakafo. Ny filàna sy ny fiasan'ny taova dia mamaritra ny karazana sakafo takiana. Ny biby mamono dia tsy miaina tsy misy sakafo na matetika tsy misy rivotra, na dia tsy ilaina azy ireo aza ny maka sakafo ao amin'ny taovam-pandevonan-kanina, mba hihazona azy mandritra ny vanim-potoanan'ny fivorian'izy ireo. Matetika ny fofon'aina amin'ny alàlan'ny havokavoka dia miaina fotsiny, fa ny fanajana azy ireo dia tsy ampy afa-tsy ny hitazona ny vatany amin'ny fifandraisana amin'ny fiainany izay mihena tanteraka, ary toa tsy ho sempotra mihitsy aza ireo biby.
Ireo karazana biby sy ny fahazarany dia nalamina arakaraka ny lalàna ara-toekarena sasany amin'ny fiarovana ny zavaboary. Ny sakafo dia ilaina amin'ny fikojakojana ny firafitra rehetra, ary ny sivilizasiona no nahatonga azy ho ilaina satria tsy maintsy vetivety ihany ny elanelan'ny sakafo. Ny olona efa zatra ny sakafo telo na mihoatra azy isan'andro dia tsy mahazo na tsy mankasitraka ny fomba ahafahan'ny biby mandeha andro na herinandro tsy misy sakafo, ary ny sasany dia afaka miaina mandritra ny ririnina tsy mihinana. Ny biby ao amin'ny faritra misy azy dia mila sakafo kely kokoa noho ny olona. Ny sakafo nohanin'ny biby voajanahary dia ny famatsiana ny filàny ary noho izany ny sakafo mihinana dia manome ny filàny ny vatany.
Fa ny sakafon'ny olona koa dia tsy maintsy manome ny angovo ilaina amin'ny hetahetan'ny ati-doha sy izay ilainy. Araka ny toekaren'ny natiora, ny sakafo izay mihinana ny olona dia mampitombo ny angovo azony ary manampy amin'ny heriny. Matetika izy no mampihena ny heriny amin'ny fahafinaretana be loatra. Izay mihoatra ny ampy dia mihinana ny biby mba hanomezana izay ilainy ankehitriny dia voatahiry ao amin'ny vatany toy ny angovo be loatra, ary eo amboniny, rehefa tsy ampy ny filana sakafo.
Rehefa manakaiky ny ririnina, dia miakatra matavy ireo biby izay mamony matavy ary vonona hanomboka amin'ny torimaso ririnina. Ny hatsiaka nanapaka ny sakafon'izy ireo sakafo, manafaka ny tany ary mametraka azy ireo any an-davany. Avy eo izy ireo dia miforitra na mametaka ny tenany amin'ny toerana izay miaro tsara ny hafanan'izy ireo ary miaro amin'ny hatsiaka. Mihena ny fofon'aina, ny isa sy ny halavan'ny fifanajana dia arakaraka ny habetsaky ny solika ilaina ilaina hitazomana ny lelafo. Ny sakafo ampiasaina dia tsy ho an'ny fiaraha-mientana ho an'ny hozatra, fa ny famatsiana ny taova miaraka amin'ny angovo ilaina hihazonana azy tsy ho raikitra, amin'ny alàlan'ny vanim-potoana haharitra sy hatory maharitra. Ity sakafo na solika ity dia angovo be dia be izay notahiriziny tao anaty vatany, amin'ny endrika tavy ary izay nalaina nandritra ny filatsahany araka ny filan'ny vatana.
Raha mitodika ny masoandro ny masoandro, ny tara-masoandro, fa tsy ny fijerena ny velaran-tany toy ny amin'ny ririnina, izao dia mitokona mivantana mivantana amin'ny tany, ampio ny angovo magnetika ary manomboka manomboka ny fofon'aina sy ny fandehan'ny fiainana ao anaty hazo. Ny fitaomana ny masoandro koa dia manaitra ireo biby mamofona amin'ny torimasony, tsirairay avy araka ny toetrany, ary rehefa omanin'ny masoandro ny famatsiana sakafo azy.
Ny mivezivezy amin'ny ra dia ilaina ny fitandremana noho ny oksizenina izay ilain'ny ra ary miditra amin'ny havokavoka. Mitombo ny fitempon'ny alahelo noho ny fitomboan'ny fihodinana. Ny mivezivezy dia mavitrika satria haingana sy lalina ny fihaviana. Mampiasa ny ra ny mazoto ary ny mivezivezy mavitrika dia mampitombo ny fiterahana, izay mampiasa ny angovo nomen'ny sakafo. Ny tsy fahatomombanan'ny biby dia mihena ny fihodinanany. Ao amin'ny biby mandroso dia mihena ny halehiben'ny fivezivezena ary sarotra ny tsy manaja azy raha tsy azo ekena mihitsy. Fa misy biby izay mampiato ny fihenan-drivotra sy ny fihetseham-pon'ny olona ary izay ijanonan'ny fiasan'ny taova.
Afaka miaina tsy misy aina ve ny biby amin'ny havokavoka? Raha eny, ahoana no iainantsika?
Ny biby sasany misy havokavoka dia miaina nefa tsy miaina. Ny biby toy izany dia mijanona ho velona amin'ny fampiatoana ny fiasan'ny taova mitaky famatsiana ara-tsakafo sy amin'ny fanohizana ny fifandraisana mahavelona ao anatiny miaraka amin'ny fitsipiky ny fiainana, ny ranomasina tsy hita maso ary tsy azo tsapain-tanana, amin'ny alàlan'ny lozisialy manambatra ny fitsipika mifehy ny vatany vatana. Tsy fahita firy raha sendra herintaona izay ny gazety dia tsy milaza zavatra sasany mifandraika amin'ny fahitana biby izay niaina nandritra ny vanim-potoana tsy nahy. Matetika ny mpanoratra ny lahatsoratra no nahare voalohany tamin'ny zava-misy toy ny zavatra nosoratany, ary azo inoana fa mamaritra azy io ho toy ny tranga voalohany amin'ny karazany voarakitra an-tsoratra izany. Raha ny tokony ho izy dia betsaka ireo tranga voamarina tsara voarakitra, ao anaty diary siantifika malaza. Tsy volana vitsivitsy lasa izay, ny iray amin'ireo taratasy maraina dia nanome fitantarana ny fahitana mahatalanjona toy izany. Andiana mpikaroka no nikaroka fombafomba sasany mba hahaliana ny siansa. Nanam-potoana nanapahana ny faritra vato izy ireo. Tamin'ny iray amin'ireo fanapahana azy ireo dia nisokatra ny vatolampy mivaingana ary nanambara tery iray izay napetraka tao anatin'izany faobe marobe izany. Avy hatrany dia nanjary zava-dehibe nahaliana ilay rantsan-tongotra. Raha nijery azy ny nandehanana tao anaty efitranony kely izay nampidirina am-potony azy nandritra ny taonjato maro, dia nisy iray tamin'ny antoko nitazona azy hahitana raha toa ka voadona, ary nanaitra azy rehetra ireo tamin'ny alàlan'ny nandao ny fasany. Ilay mpikambana izay nitatitra ny fahitany dia nilaza fa efa naheno sy novakiany ny raharaha toa azy, fa na izany aza dia niahiahy ny mety ho izy mandra-pisedra ilay trangan-javatra. Tamin'ny fotoana nitaterana ny zaza dia mbola velona ary tsara. Indray mandeha dia notaterin'ny olona manafika fa raha nanapaka ny vatolampy vato teo anilan'ny fantsom-drano taloha izy, raha ny vatolampy dia nanisy tsika nanakodia, ary nosamborina izy raha nanomboka nanomboka nikoropaka hakamoana.
Biby izay hita velona mifamatotra eo anelanelan'ny vatolampy, na voaofina amin'ny vatolampy mivaingana, na izay naniry ho hazo, na nalevina tao an-tany, dia biby izay mankamamy, nefa afaka mampiato ny asan'ny organika rehetra amin'ny alàlan'ny fanesorana ny famatsiana rivotra. ary manapaka ny fifandraisana ara-batana amin'ireo afovoan-nerve sasany ary apetaho amin'ny fifandraisana eterika. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny fanakodia ny lela hiverina amin'ny tendany ary mameno ny fifindran'ny rivotra amin'ny lela. Ny lela dia nihodina nanodina ny lelan-tany ary natsahatra avy any amin'ny tendrony ambony. Manokana tanjona roa ny lela. Mametaka ny savon-drivotra io, ary miaro ny fampidiran'ny rivotra ao anaty havokavoka, ary, arak'izay, apetraka izy io, dia manao bateria iray izay mandehandeha eo amin'ny vatana ny fivezivezena raha mbola mihidy ilay faritra. Rehefa nikatona avy amin'ny havokavoka ny famatsian-drivotra dia tsy afaka hampivarina ny ra; mihena ny oxygenation ra raha tsy misy famatsiana ra dia tsy afaka manatanteraka ny asany ny taova. Manaraka ny fepetra ara-dalàna ny fahafatesana, satria ny fofon'aina dia tapaka, fa ny fofonaina kosa dia tokony hihazona hatrany ny milina ara-batana. Fa raha tapaka ny famatsiana rivotra amin'ny havokavoka misy fifandraisana malefaka kokoa noho ny fofonaina vita eo anelanelan'ny vatana vatana sy ny ranon'ny aina, dia azo tazonina ny vatany raha mbola mihetsika ny fiainana sy ny vatana mijanona mangina.
Raha mbola voatahiry ao amin'ny toerana voalaza ao ny lela, dia ho velona ny biby; nefa tsy afaka mifindra izy, satria ilaina ny fofonaina rivotra mba hanaovana hetsika ara-batana, ary tsy afa-miaina izy raha toa ny lelany manakana ny fihoarany. Rehefa esorina ny lela ny fifandraisana amin'ny fiainana mikorontana dia tapaka, fa ny fiainana ara-batana dia manomboka amin'ny alàlan'ny rivotra mifoka rivotra.
Ankoatry ny fahitana fa hita ho velona amin'ny vato matevina ny kirihitra sy ny mpitsikilo, maro ny fanombatombanana no nitaona azy ireo, ny amin'ny hoe ahoana, tsy nahalala izy ireo. Raha mikasika ny fomba nampidirina tamin'ny vato ny rantsan-tongony na ny mpitsoka, dia mety misy fomba roa mety horesahina ireto manaraka ireto.
Raha misy zavaboary iray hita ao anaty vato eo amoron'ny ony renirano, dia azo atao fa, mandritra ny vanim-potoana tsy hiasa ara-batana, dia nidina ny rano ary nandrakotra azy ary nisy fako avy tao anaty rano izay mipetraka manodidina ny vatan'olombelona ary nogadra azy. Raha misy biby hita ao anaty vatolampy mipoitra, azo atao fa raha amin'ny toerany mangatsiaka ara-batana dia mijanona amin'ny lalana izy ary rakotry ny renirano mihena mikoriana avy amin'ny volkano iray. Mety ho azo atao ny fanoherana izay tsy misy tokan-doha na mavo ao anaty rano lava ary hiaritra fametrahana antonina ao anaty vatobe maro momba azy, na koa tsy mahasakana ny hafanana sy ny lanjan'ny vato molotra. Ireo fanoherana ireo dia ho very ny maha-zava-dehibe azy amin'ny olona izay efa nitandrina ny fahazarana ny omby sy ny mpitsikilo, rehefa tsaroany ny hafanana mafy izay toa ankafiziny, ary rehefa takatra fa na dia mihamalemy aza ny vatana ary mifandray amin'ny mpitrandaka amin'ny fiainana, tsy mahazaka ny toe-batana sy ny fahatsapana hafanam-po izy ireo.
Moa ve ny siansa no manaiky lalàna iray izay ahafahan'ny olombelona miaina tsy misy sakafo sy rivotra; raha izany no izy, efa velona ny olona, ​​ary inona ny lalàna?
Araka ny siansa maoderina dia tsy misy lalàna toy izany, satria tsy misy lalàna toy izany fantatra amin'ny siansa maoderina. Ny lehilahy iray dia afaka miaina mandritra ny fotoana maharitra tsy misy sakafo sy rivotra tsy eken'ny siansa ofisialy. Tsy afaka misy, araka ny siansa, izay lalàna mamela ny olona hiaina tsy misy sakafo sy rivotra, ny porofo rehetra na dia izany aza, mandra-pahavitan'ny siansa ny lalàna ary nankatoaviny tamin'ny fomba ofisialy izany. Na izany aza, ny olona dia niaina nandritra ny fotoana maharitra, tsy nisy sakafo ary tapaka tsy ho an'ny rivotra, araka ny voalazan'ireo vavolombelona azo itokisana, ary toy ny an-dàlam-piainana ao amin'ny firaketana imasom-bahoaka. Any Inde dia maro ny firaketana an-tsoratra amin'ny vanim-potoana maoderina, ary ny kaonty sy ny angano miverina mandritra ny taonjato maro, ny yogis izay noho ny fanao sasany dia nahavita sy nampiato ny fiasan'ny vatana ary nijanona tsy nisy rivotra nandritra ny fotoana ela. Saika ny Hindoa rehetra na ny naheno na nanatontosa ny fampisehoana toy izany. Ny iray amin'ireny kaonty ireny dia ho ohatra.
Mba hanaporofoana fa afaka mahazo hery miavaka ny olona izay mazàna ho heverina ho tsy azo atao, dia nisy ny yogi hindoa iray nanolotra tamin'ny polisy sasany fa afaka hiaina ela tsy misy sakafo na rivotra izy. Ny English English dia nanolotra fepetra momba ny fitsapana, izay nekena, na izany aza, na izany na tsy izany fa tsy misy ny cheogi, mpianatry ny yogi, manomana azy amin'ny fitsapana sy hikarakarana azy aorian'izany. Tamin'io fotoana io dia nanendry fivondronana olona maro tafangona mba hitory ny fahagagana mikasika izay ho tanterahina. Niparitaka tamin'ny alàlan'ny mpihaino azy lehibe ny yogi, nipetraka tamin'ny fisaintsainana mandra-pankany amin'ny mpianatra nahita azy fa nisy fiovana tonga teo aminy. Avy eo dia napetrany tao anaty vata lava izy ireo, izay voasarona ary napetraka ao anaty vata fitarihan-jaza. Nopetahana ny saron'ilay vatazo ary nasiana tombony ilay izy ary nidina ho tongotra enina tongotra. Natsipy tamin'ny vatam-paty ny tany avy eo, ary nisy voa afafy nafafy tao aminy. Miambina hatrany ny manodidina ny miaramila, izay toerana iray manintona ny mpitsidika ihany koa. Volana lasa izay dia nitombo ny ahitra. Tamin'io fotoana io no nifanarahana tamin'ny antoko rehetra voakasik'izany, ary maro ny mpanatrika, satria niparitaka be ny vaovao. Nofotorana tamim-pankasitrahana tokoa ny bozaka. Tapaka ny sodina ary nesorina, nisokatra ny tany, nisondrotra ilay vatan-dehilahy mpitifitra, notapahina ny tombo-kase ary nesorina ny tombo-kase, ary hita niampanga an'i Yogi rehefa napetraka izy. Nesorina tamim-panajana izy. Nofoson'ireo mpianatra ny tongony, nohodininy ny masony sy ny tempoliny, dia nosarihany sy nosasana ny lelany. Vetivety dia nanomboka ny fihetseham-po, nokapohina ny pulse, feo iray nivoaka avy any amin'ny tendan'i Yogi, nanakodia ny masony ary nisokatra izy dia nipetraka ary niteny. Ny hany tsy fitovian'i Yogi dia hoe hita fa mihamiratra kokoa izy noho ny amin'ny fotoana fanelanelanana sy fandevenana. Ity raharaha ity dia voarakitra amin'ny iray amin'ireo tatitry ny governemanta.
Ireo izay milaza fa mahalala ny fomba fanao ilaina dia manjary amin'ny toe-javatra mampangovitra toy izao, dia lazao fa ny Yogis dia manomana ny tenany amin'ny fanaovan-tsofina sasany ary amin'ny fitsaboana ny lela sy ny tenda. Ny tenin'izy ireo ary voalaza ao amin'ny boky mifandraika amin'ny lohahevitra hoe "Yoga", fa amin'ny fisaintsainana sy fanazaran-tena amin'ny fofonaina, fihosohana ary fitazonana ny fofonaina dia mety hahemotra ny fiasan'ny taova ara-batana ary mbola tazomin'ny vatana ihany ny vatana. . Voalaza fa ilaina ho an'izay handeha anaty trance lava aloha vao afaka manodina ny lelany ao amin'ny tendany. Mba hahavitana izany ara-batana, dia voalaza fa ny fifandraisan'ny valan-java ambany sy ny lela dia tsy maintsy tapahina na esorina. Avy eo i Yogi dia tokony hisintona - na ilay antsoina hoe «ronono» - io lela io mba hamehezana azy amin'ny halavany ilaina amin'ny fandidiana. Ny mpampianatra azy dia mampiseho azy ny fomba.
Na izany na tsia ireo karazana Yogis ireo dia nianatra nanahaka biby nametaka ary nandrafitra ny toe-javatra voajanahary amin'ny biby sasany, na izany aza dia mitovy ny toe-javatra sy ny dingana, na dia tsy ampy aza ny Yogi amin'ny fanafiana voajanahary azony amin'ny fampiharana, na fomba artifisialy. Ny lelan'ny tadin-kirihitra na androngo dia tsy mitaky fandidiana mba hanomezany halavany azy, ary ireo biby ireo dia tsy mila fanaovan-tsaka ny fofonaina mba hampifandraisana azy ireo amin'ny fivezivezena anatiny. Ny vanim-potoana sy ny toerana no hamaritana ny fotoana hidirany. Izay azon'ny biby atao amin'ny fanafiana masina voajanahary, dia azon'ny olona atao koa ny mianatra. Ny fahasamihafana dia ny fananan'ny olombelona ny manome ny saina, izay tsy ampy amin'ny natiora.
Ho an'ny olombelona raha miaina tsy misy fofonaina dia tsy maintsy mifandraika amin'ny fofonainy. Rehefa mikoriana ny fofonainy ara-batana dia miato. Ny fofon'aina ara-tsaina indraindray dia manosika tsy nahy amin'ny fihetsik-tsaina na fikorontanana ara-tsaina, na mety ho voatosiky ny fanatanjahan-tena na ny sain'olom-poko hafa, toy ny fahatsapana hadisoana lalina na hypnotic. Raha ny sitrapony, ny sitrapony dia mandalo ao amin'ny firenena izay iainany nefa tsy miaina akory dia manao izany amin'ny fanaovan-tena sy ny fofonaina toy ny voalaza, na, afa-tsy ny fofonaina voajanahary, tsy misy fihetsehana ara-batana. Amin'ny tranga voalohany dia mifandray amin'ny fofonainy ara-tsaina amin'ny vatany etsy ambany izy. Amin'ny tranga faharoa dia mitantara ny fofonainy ara-tsaina amin'ny vatany izy avy amin'ny sainy etsy ambony. Ny fomba voalohany dia amin'ny alàlan'ny fahatsapana, ny faharoa dia amin'ny alàlan'ny saina. Ny fomba voalohany dia mitaky ny fivoaran'ny fahatsapana anatiny, vita ny fomba faharoa rehefa misy mianatra ny fomba hampiasany ny sainy an-tsaina, ka tsy miankina amin'ny sainy.
Betsaka ny lanjan-javatra misy sy ny vatana iray no miditra ao anatin'ny fananganana olona. Ny vatany na ny saram-pianarany dia nalaina avy amin'izao tontolo izao izay misy azy. Fa ny famatsiana aina indrindra dia amin'ny alàlan'ny vatana iray izay mamindra ny fiainana ho an'ny hafa. Rehefa raisina amin'ny alalan'ny ara-batana ny famatsiam-piainana dia ampiasaina ary nafindra tany amin'ny psikôlôjia. Rehefa tonga amin'ny alàlan'ny psykolo ny famatsian-tsakafo lehibe dia mamindra sy mamelona hatrany ny vatana izy. Ny lalàna dia ny olona afaka mitazona ny vatany ho velona amin'ny fofon'ainy afaka manome azy.